Mustafi oo sheegay sababtii uu ku yimid Emirates | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Mustafi oo sheegay sababtii uu ku yimid Emirates
Mustafi oo sheegay sababtii uu ku yimid Emirates
Posted by: radio himilo January 17, 2017
Muqdisho – Shkodran Mustafi ayaa tilmaamay in joogitaanka macalin Arsen Wenger ee kooxda Arsenal ay door ku laheyd doorashadiisa ah kusoo biirista kooxda ka dhisan waqooyiga London.
Laacibka heerka caalami ee xulka Jarmalka ayaa yimid Arsenal uga yimid dhinaca Valencia kadib markii Wenger uu ishaartay sida laacibkani u dabooli karo baahida dhanka daafaca ah ee heysata kooxda.
Durbadiiba, Mustafi ayaa noqday laacibka shacbiyad ku yeeshay taageerayaasha kooxda – isaga oo sheegay inay ahayd xasiloonida kooxda iyo macalin Wenger oo u dabaal-degay sanadguuradii 20aad ee leylinta Arsenal, midda ku riixday inuu la saxiixdo Arsenal.
“Mararka qaar ma ogaan kartid waaya’aragnimada tababare ilaa aad leyligiisa kamid noqoto,” Mustafi ayaa u sheegay Goal. “Ka isaga ahaan, noqoshadiisa macalinka Arsenal ayaa qeyb weyn ku laheyd kusoo biiristayda kooxda.”
Wenger ayaa heshiiskiisu ku dhiman yahay bilo tirsan hayeeshe laacibkan iyo kuwa kale ee kala tirsan naadiga ayaa qaba in macalinku kusii nagaado kooxda.
“U ciyaarista kooxaha Valencia iyo Sampadoria sanadkiiba, waxaa noo imaan jiray macalin cusub kaas oo aragti cusub, tababar cusub iyo shax cusub soo bandihigaya. Tani waxay igu ahaan jirtay jah wareer.”
“Hadda laakiin inaad hesho macalin ku dhawaad 20 sanadood ku nagaaday kooxdiisa, waxay sidoo kale ku siinaysaa nagaasho iyo dagani.”
Mustafi ayaa sidoo kale sheegay in daaficii hore ee kooxda Man Unitedka, Rio Ferdinand uu yahay ninka uu kaga deydo daafacnimada iyo raacashada weeraryahannada.
Previous: Sawir sidee ayaa laga dheehan karaa shaqa-ka-fariisadka macalin Van Gaal?!
Next: Muslimiinta Malawi oo helay turjumada Qur’anka oo ku dhigan afkooda